Fri, Apr 20, 2018 | 12:47:56 NST
​पहिलाको बाँझो जमिनबाट अहिले कमाउन थालेको छु
विदेश उड्दा देख्ने सपना र यहाँको यथार्थ
मलेसियामा कामदारलाई पर्ने समस्या, दूतावासले गर्ने सहयोग (भिडियो) कम्पनीबाट भागेर अवैधानिक हैसियतमा रहेका कामदारलाई रोजगारदाताले थोरै पैसा दिएर जस्तोसुकै काम लाउने गरेको कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले बताउनुभयो ।
मलेसियाबाट फर्किएका नरेश घरबाटै हराए नरेश हराएको १४ महिना भयो । नरेश भेटिउन भनेर शान्तिदेवीले मन्दिरमा पुजा गर्नुभयो । धामी झाँक्रीलाई पनि देखाउनुभयो । केही नलागेपछि उहाँलाई प्रहरीमा निवेदन पनि दिनुभएको छ । तर अहिलेसम्म कतैबाट केही खबर आएको छैन ।
​देखिएको जोडीको छेकिएको कथा २ आफ्नै छोरालाइ भेट्न समेत सहज भएन किरणलाई । पुराना कुरा सम्झिदै गर्दा किरणको आँखाको डिलबाट आँसुको थोपा ओरालो लागेको थियो ।
१८ वर्षपछि घर फर्कँदा ६ जना छोराछोरीसहित श्रीमतीलाई अर्कैसँग भेटेपछि... उनले म हिरा होइन भन्दै थिए रे ! तर, तिमी नै हिरा हौ । तिम्रो श्रीमती–आमा मात्रै घरमा छन् । उनीहरु तिम्रो प्रतिक्षामा छन् । तिम्रो बाटो हेरेर बसेका छन्, ५-६ वर्षमा नै कस्तो घर भुलेको ? भनेर उनलाई मेरो घर फर्काएछन् ।
​त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान अवरुद्ध हुँदा युएईमा यात्रु अलपत्र
वैशाख ७ – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द भएका कारण नेपाल जान लागेका यात्रुहरु युएईमा अलपत्र परेका छन् ।
​शुक्रबार रियाल, रिंगिट, दिर्हाम लगायत विदेशी मुद्राको सटही दर बढ्यो
काठमाडौं, वैशाख ७ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २७ रुपैयाँ ९९ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख ६ – सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका वडा नं. ९ घाटगाउँमा फागुन २९ गते आगलागी हुँदा जलेर नष्ट भएको प्रदीप नेपालीको घर दक्षिण कोरियामा रहेका युवाहरुले निर्माण गरिदिने भएका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख ६– सर्वोच्च अदालतले मानव बेचविखनको अभियोगमा पक्राउ परेका नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
कार्यक्रम देश परदेशको अंक ३०२ अवसरको खोजिमा विदेशिने नेपालीहरुमा केन्द्रित छ । कार्यक्रममा रुकुमका प...
देश परदेश ३०१